Banyere Anyị - Foshan Qianbei Hardware Furniture Co., Ltd.
e hiwere na 2013.
Foshan Qianbei Hardware Furniture Co., Ltd. hiwere na 2013.
Ọ bụ ụlọ ọrụ azụmahịa dị iche iche na-ejikọta mmepụta, ahịa na nchọpụta ngwaahịa na mmepe.Ụlọ ọrụ ahụ na-agba mbọ na mmepụta na mmepe nke ngwá ụlọ na-asọmpi eletrọnịkị ọkachamara, gụnyere isi ihe atọ: tebụl egwuregwu, oche na-ebuli elu na oche egwuregwu.
Ngwaahịa ya dabara adaba maka tebụl egwuregwu ụlọ na oche, yana maka cafes ịntanetị, ụlọ ahịa ịntanetị ọhụrụ, yana arịa dị iche iche ahaziri ahazi maka egwuregwu aka na ụlọ egwuregwu E-sport.
Soro anyị ka anyị na-agbakọ ụwa egwu egwu!
Ndị otu mmepe ngwaahịa anyị bụ ndị egwuregwu na-achọkarị usoro egwuregwu kachasị ọhụrụ iji weta ngwaahịa ọhụrụ na obodo.TwoBlow etoola nke ukwuu maka nlebara anya ya na ngwaahịa dị elu, nhazi ọkwa dị elu yana ntinye aka na mgbasawanye.
Site na mmalite na China, ịghọ aha a ma ama n'ụwa nile na ụlọ ọrụ ahụ, TwoBlow na-ere ugbu a ngwaahịa n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ ọ bụla nke ụwa gụnyere America, Europe, UAE na Australasia.
Site na mmalite nke nguzobe ya, ụlọ ọrụ ahụ etinyela ya na mmepụta nke ngwaahịa dị elu.
Site na tebụl cafe ịntanetị na oche ruo na desktọpụ egwuregwu na oche, anyị na-ahụta ịdị mma mgbe niile dị ka ọkọlọtọ ịlanarị nke ụlọ ọrụ,dị ka ọtụtụ narị otu narị ngalaba na-arụkọ ọrụ ọnụ, nke na-egosipụta ụzọ nke mmepe ụlọ ọrụ anyị kemgbe ọtụtụ afọ: "Ebe E Si Nweta maka mmepe, àgwà maka nlanarị!"
A mụrụ TwoBlow site na echiche dị mfe: Ka ịtụgharị uche n'otu n'ime ngwa egwuregwu ndị a na-atụghị anya ya ma gbanwee ya ka ọ bụrụ ihe na-enyere ndị na-egwu egwuregwu aka ịme nke ọma na ahụike.
Ọ bụ ihe mbụ anyị no.1 iji hụ na obodo egwuregwu anyị nwere afọ ojuju na ngwaahịa ha nwetara.Ya mere ngwaahịa TwoBlow niileA na-enyocha onwe ha iji hụ na ha karịrị ụkpụrụ EU na USA niile, iji hụ na ngwaahịa dị mma na nchekwa maka gị na ezinụlọ gị.
Ndị otu anyị nwere ndị ọkachamara dị iche iche mana nke mbụ, anyị niile bụ ndị egwuregwu!Anyị na-etinye nnukwu mkpa na eziokwu ahụ bụ na onye ọ bụla na-arụ ọrụ na anyị nwere ike ịmata mkpa na ọchịchọ nke ndị egwuregwu.Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ ọ bụghị naanị imepụta tebụl kamakwa hụ na ị na-ekpori ndụ egwuregwu n'ụzọ kacha mma!